AKINCI TİHA Documentary, Bayraktar uye Engineers anotaurazve | RayHaber | raillynews
mushaTURKEYCentral Anatolia Region06 AnkaraAKINCI TİHA Chinyorwa, Bayraktar uye Injiniya Inotaurira
22 / 05 / 2020 06 Ankara, Central Anatolia Region, GENERAL, mamiriro okunze, musoro wenyaya, KUZVIDZIVIRIRA, TURKEY, VIDEOS
Akinci tiha zvinyorwa, Bayraktar uye mainjiniya vanotaurira
Turkey kwakaita unmanned zvemuchadenga motokari kurwisa rokutanga kuti Bayraktar AKINCI tiha kukura danho yakawanda kuratidza "AKINCI" Documentary May 24, 2020 Svondo zuva, zuva Ramadan, imi Baykara wokutanga maawa 20.23:XNUMXTube achapiwa kutepfenyurwa pamusoro chiteshi.
munhu akaoma pachikumbaridzo muTurkey paaizvidzivirira indasitiri kuchatungamirira mumwe kukosha mabasa ayo kusapfuudza tiha AKINCI Bayraktar (tsamwisa UAV) kukura basa rakanga musoro vhidhiyo. Bayraktar raiders dzinoona kuva wokutanga unmanned zvemuchadenga motokari yakataurwa Turkey kuti inogumbura kirasi uye bikers "AKINCI" zita rakapiwa kuti vhidhiyo akatevedzana kunoratidza kokutanga.
Baykar Technical Manager Selcuk Bayraktar yakabudiswa Trailers maviri kusimudzira vhidhiyo rake mumagariro nevezvenhau Nhoroondo. Iyo documentary, inotsanangura akakosha ekugadzira zvikamu uye mabasa ebudiriro yeBayraktar AKINCI TİHA, nemusi weSvondo, Chivabvu 24, 2020, zuva rekutanga reEid al-Fitr, inonzi "Baykar Technologies", inova Baykar pa20.23.Tube Ngazvidyirwe kutepfenyurwa pamusoro mugero kokutanga.
Kufema kwakatora mwedzi 6
Kwegwaro, rinotungamirwa naAltuğ Gültan naBurak Aksoy, kupfura kwakaitwa kwemwedzi mu Çorlu Airport Command uko Baykar Milli S / İHA R&D uye Production Zvigadzirwa muIstanbul uye Bayraktar AKINCI TİHA zvakaitwa. Iyo gwaro redhisheni, iyo yakatanga muna Kukadzi 2019, yakapera mumwedzi inosvika gumi nemashanu. Vhidhiyo nezvokuti okupedzisira 15 mwedzi yacho yakaoma uye mubishi nguva kusvikira December 6, 2019, apo Bayraktar AKINCI akaita ndege yayo yokutanga.
Bayraktar uye Injiniya Vanotaurira
In vhidhiyo, Baykar Technical Manager Selçuk Bayraktar uye vatungamiriri engineering zviumbu tsanangura basa kuitwa kubvunzurudzwa navo. Muitiro kuva imwe ndege pamwe yepamusorosoro vhidhiyo pamwe kokutanga muTurkey vachasangana vateereri.
The kumumvuri pamusoro Bayraktar AKINCI, PT-1, kutanga akaita ndege yayo yechipiri sezvo chikamu System Verification Test musi waJanuary 10, 2020. Yechipiri Bayraktar AKINCI, iyo yekubatanidzwa kwayo yakazopedzwa nguva pfupi yadarika uye yakanzi PT-2, yakatumirwa ku Çorlu Airfield Command uko mabasa ebvunzo achienderera mberi. Air uye ivhu miedzo Bayraktar AKINCI TİHA chichaitwa pamwe chete prototypes maviri.
Turkey achava mumwe nyika nhatu munyika
Baykara hunovapo ruzivo rwokugadzira kukura unmanned zvemuchadenga motokari UAV AKINCI Bayraktar, nyika ndichaiita Turkey mumwe kumusoro 3 nyika kutanga motokari unmanned zvemuchadenga mukirasi iyi. Bayraktar AKINCI, iyo inokwanisa kugara mumhepo kwemaawa makumi maviri nemana uye ine dhizaina remamita zviuru makumi mana, inomira kunze iine huremo huremo hwemakirogiramu 24, kusanganisira 40 kilogiramu yemukati uye 400 kilos kunze. Bayraktar AKINCI TİHA, iyo ine huremu hunorema hwemakumi mashanu emakirogiramu, inokwira kudenga kune 950 turboprop injini ine 1.350 HP simba. Bayraktar AKINCI TİHA chiri chakagadzirirwa achibhururuka configurations siyana nokuda injini kuti pave 5.500 × 2 HP uye 450 × 2 HP simba hunovapo mudzimba zvivako kubudikidza TEI.
The ndege papuratifomu, iyo ine mapapiro 20 metres wayo yakasiyana yakakoswa bapiro mamiriro, Zvicharatidzawo mukuru ndege chengetedzo nekuvongwa kwayo zvizere kwangoitwa ndege kuzvidzora uye 3 wandisa auton mutyairi wendege hurongwa. Bayraktar AKINCI, iyo inozokwanisa kuita mabasa pamwe nemamita yenyika iyo ichaendesa nekuda kwekushandisa kwayo kwakakura mutoro, ichave chinhu chikuru chemagetsi nekukwanisa kwayo kupisa nyika nhumwa dzakagadzirirwa zvirongwa zvehurongwa hwakadai seSOM cruise missile. Bayraktar AKINCI, iyo ichave neyakakwirira mamiriro ekuzivisa pamwe neyemukati kugadzirwa AESA radar inowanikwa muchikamu chemhino, inokwanisa kuita mashandiro neGökdoğan neBozdoğan mweya-mhepo ammunition yakagadzirwa munyika neTÜBİTAK SAGE. The ndege, izvo achatakura dzinonetsa mitoro akadai eo / vaIri kamera, AESA radar, Beyond Line pamusoro Sight (Satellite) kukurukurirana uye zvemagetsi rutsigiro enyika, vachavawo yemhando kubata njere zvinhu.
Uchabhururuka neArtificial Intelligence
Ichagona kuunganidza ruzivo nekureketa dhata yarinowana kubva kumanzwi uye makamera ari mundege achishandisa makomputa matanhatu euchenjeri. Izvi hazvizivi njere hurongwa, iyo achakwanisa kuziva pakona kuti tilting, amire uye vaienda pamusoro ndege pasina kudikanwa Switch chero zvekunze kana Global Positioning System (GPS), Zvicharatidzawo kwezvakatipoteredza ruzivo vachishandisa nenzvimbo ruzivo. The yepamusoro kubata njere hurongwa vachava kukwanisa kuita zvisarudzo processing humboo nayo achakumbira. Iyi inoongorora yeuchenjeri hwekugadzira, iyo inozogona kuona tarter yepasi isingaonekwe neziso remunhu, ichaita kuti shande kushandisa Bayraktar AKINCI.
Muchava The Nomutungamiriri With Radar kugona
Tiine munharaunda yakatanga AESA radar, Bayraktar AKINCI TİHA, izvo zvinogona kuita mabasa dzakakwirira ezvinhu ruzivo, achakwanisa kutora mifananidzo wayo chakaita zvokugadzirwa Aperture Radar kunyange zvakaipa mamiriro ekunze apo Electro optic gadziriro zviomere nokutora mifananidzo. Iyo ndege yenhare, iyo inosanganisira meteorology radar uye yakawanda-chinangwa chemo radar, ichave iri mutungamiriri mukirasi yayo neanogona aya.
Architects uye Engineers Group Kadıköy-Kartal akaudza nezve subway yake!
Injini dzakaongorora migwagwa yeIstanbul-Gebze-Orhangazi-Izmir inoshanda
KBU Engineers Vakaratidzwa Zvidzidzo Zvidzidzo
Metroray General Manager Cengiz Madzitateguru njanji kwemauto muTurkey anoudza hurongwa
Anatolia, Baghdad neHejaz Railway vanoudzwa nemuenzaniso muBerlin
Samsun City Mazvivako ezveMumiti zvinotaurira nhoroondo yemugwagwa weguta racho
SAMULAŞ Inotsanangura Zvakanakira ZveRuzhinji Vokufambisa Kune Vadzidzi
Istanbul Metro Vashandi Vokuvaka Vanoudza: Mari dzisingapindi, Chikafu ndiKurtlu
Şakir Zümre anotaurira ndangariro dzake nezveAtatürk
Turkcell Postpaid uye Prepaid GNC Packages uye Tariffs - GNÇ Fırsat Midi
VaTrump Vanorega ChiChina Kupinda kuAmerica
Nhasi munhoroondo: 30 May 1935 Musi uye Mutemo Nhamba 2775
Afyon Kocatepe University Yakarongeka Rail Systems paChirangaridzo
Mutungamiri Bayraktar anoshamiswa neTrabzon Logistics Center